रबि लामिछानेको जनमैत्री अस्पतालमा अर्को का’ण्ड-८ लाखको विल असुल गर्न विरामी नै कब्जा ! • raradiodarpan.com
रबि लामिछानेको जनमैत्री अस्पतालमा अर्को का’ण्ड-८ लाखको विल असुल गर्न विरामी नै कब्जा !
चर्चित सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले सञ्चालन गरेको वालाजुस्थित जनमैत्री अस्पतालले विरामीमाथि गर्ने गरेको अर्को अमानवीय ब्यवहार सार्वजनिक भएको छ ।यसअघि सोहि अस्पतालले विरामी भर्ना गरेकै १ लाख रुपैयाँ असुलेको प्रमाण फेला परेको थियो। जुन सरकारले तोकेको भन्दा वढि शुल्क हो ।
‘निःशुल्क तथा सर्वसुलभ उपचार’ भनेर विज्ञापन गर्ने उक्त अस्पतालले अहिले कञ्चनपुर जिल्लाका अर्का एक जना विरामीलाई पैसा नतिरेको भन्दै चौविस घण्टा कब्जा गरेको घट्ना सार्वजनिक भएको छ ।
हिजो (जुन ७, २०२१ सोमवार) नेपाली रियाक्सन युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा रामवहादुर नामका आफन्तले उक्त अस्पतालको वारेमा गुनासो गरेका छन् । जनमैत्री अस्पतालमा करिव ८ लाखको बिल तिर्न नसक्दा २४ घण्टासम्म विरामीलाई कब्जा गरेर राखेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
आफुलाई परेको समस्या उनले यसरी सुनाएका छन् । हामी कञ्चनपुरवाट काठमाण्डौंमा आएर सामान्य किराना पसल चलाएर जिविका गर्दै आएका छौं । यसैक्रममा मेरो सालीलाई स्वास प्रस्वासको समस्या देखियो । निशुल्क उपचार हुने भन्ने सेनकाले जनमैत्री अस्पतालमा भर्ना गर्यो । सुरुमा त वेड छैन भनेर ढिम्किनै दिएनन् । पछि अनेक प्रयत्न गर्दा एमर्जेन्सीमा भर्ना गर्यो । पिसिआर गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो । करिव २५ दिन अस्पताल राखेपछि अस्पतालको खर्च ६ लाख ४४ हजार २५० र फार्मेसीको डेढ लाख गरेर पैसा जम्मा गर्न भनियो ।
निशुल्क उपचार गर्ने भनेको अस्पतालले यत्रो रकम मागेपछि म समस्यामा परेको छ। डिस्चार्ज गरिसकेको विरामीलाई अस्पतालले कब्जा गरेर राखेको छ । उकासेर लान सक्ने अवस्था छैन । निशुल्क उपचारका लागि विरामीका आफन्तले भर्नु पर्ने फर्मका वारेमा अस्पतालले कहि भनेर भन्ने प्रस्तोताको जिज्ञासामा उनले भनेका छन्–‘जनमैत्रीले गरिवलाई निशुल्क उपचार गर्छ भनेर आयौं। त्यो फर्मका विषयमा हामीलाई कसैले जानकारी पनि गराएन। हामीले थाहा पनि पाएनौं।
रवीसँग यस विषयमा कुरा भएको छैन। तर, वहाँको अभियानका सदस्य र अस्पताल प्रशासनका मान्छेसँग कुरा भएको छ। केहि छुट गर्दिउँला भनेका छन् । तर, हामीसँग केहि प्रतिशत छुट गरेर पनि तिर्न सक्ने पैसा छैन।’
सालीको उपचारकै क्रममा घरका अन्य दुई जना सदस्य पनि कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराईरहनु परेकाले खर्च धान्ने अवस्थामा नभएको लाचारी प्रकट गरेका उनले जसरी भएपनि विरामी घर लाने वतावरण वनाई दिन आग्रह गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस,हेर्नुहोस रवी लामिछानेको ठगी धन्दा (प्रमाणसहित): चर्चित सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले ‘देशकै सर्वसुलभ अस्पताल’ भन्दै दावी गरेको वालाजुस्थित जनमैत्री अस्पतालले विरामी भर्ना गरेकै एक लाख असुल गर्ने गरेको पाईएको छ । भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिग गर्नुहोला
रवि लामिछाने फाउन्डेसन र ग्यालेक्सी टेलिभिजनसहकार्यमा सो अस्पताल चलाइएको हो । उक्त अस्पतालमा छामिछानेले गोल्डेन शेयर लिएको (निशुल्क) चर्चा छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले जनाए अनुसार रवीले धम्क्याएरै गोल्डेन शेयर लिएका हुन । त्यसैले उनी ‘सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न नसकेको र निजी अस्पतालमा शुल्क महँगो भएको’ भन्दै जनमैत्री अस्पतालको विज्ञापन गरिरहेका छन् । भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिग गर्नुहोला
तर, सोहि अस्पतालले विरामी भर्ना गरेकै १ लाख रुपैयाँ असुलेको प्रमाण फेला परेको छ। जुन सरकारले तोकेको भन्दा वढि शुल्क हो । अस्पतालले नयाँ वजारका ६० वर्षिय रामचन्द्र श्रेष्ठ नामका विरामीसँग भर्ना शुल्क नै १ लाख लिएपछि ‘निःशुल्क तथा सर्वसुलभ उपचार’ भनेर गरिएको विज्ञापन अस्पतालको विजिनेस बढाउन गरिएको फण्डा मात्रै रहेको पुष्टि भएको छ।
यति मात्रै होईन, रवीले अस्पताल चलाउनका लागि जस्तो सुकै फण्डा प्रयोग गरिरहेका छन् । केहि दिन अघि उनले मन्त्री रामविर मानन्धरलाई अस्पतालकै गेटमा तथानाम गरे । यो पनि उनले अस्पतालतर्फ नागरिकको ध्यानाकर्षण गराउन सुनियोजित रुपमा गराएको घटनाकै रुपमा लिईएको छ।
मन्त्रीले एक सिलिण्डर अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा आफुले १ सय सिलिण्डरको ब्यवस्थापन गरेको देखाउनकै लागि यो प्रकरण गराईएको उनीमाथि आरोप छ ।
हुन त छामिछानेका हरेक कृयाकलाप कृत्रिम हुने गरेको जानकारहरु वताउँछन्। उनको वाहिरी रुप सामाजसेवी भएपनि असरी रुप भने अर्कै भएको वताउनेहरुको संख्या ठुलो छ। पत्रकारिता छोडेर व्यापार÷व्यवसाय एवम् समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको आरोप लागि रहेका तिनै रवी अहिले कमाउ धन्दामा लागेको उनीहरुको आरोप छ।
अर्कोतर्फ रवी लामिछानेले समाजसेवा तथा विपदमा परेकाहरुको सहयोग गर्ने भन्दै चन्दा पनि असुल गरिरहेका छन् । रवी लामिछाने फाउन्डेसनका नाममा भईरहेको चन्दा संकलनको हरहिसाव अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी गराउने गरिएको छैन ।
फाउण्डेसनले ७ जेष्ठ ०७८ मा मात्रै ज्वाला संग्रौला, राम श्रेष्ठ, संगीता गुरुङ्ग, सर्मिला वाईवालगायत सँग ३१ लाख ५१ हजार असुल गरेको पाईएको छ। उनले यसरी, कयौ ब्यक्तिसँग चन्दाकै नाममा करोडौं रकम असुल गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यसको छानविन हुनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। नेपाल आजबाट साभार